Niato ny vaksinin'i Moderna COVID-19 tany Japon taorian'ny fahafatesany roa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Niato ny vaksinin'i Moderna COVID-19 tany Japon taorian'ny fahafatesany roa
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nanamafy ny minisiteran'ny fahasalamana Japoney fa olona roa nanao vaksiny tamin'ny fatra nampiasana fatra avy tamin'ny andiany no maty.
Ny akora vahiny dia hita tamina andiam-baksiny maro.
Hitan'ny governemanta japoney ny faran'ny herinandro lasa teo.
Ny fahalotoana dia mety vokatry ny lesoka amin'ny famokarana iray amin'ireo andalana famokarana, hoy i Moderna.
Natsahatry ny governemanta japoney ny fampiasana ny vaksinin'ny Moderna COVID-19, taorian'ny fahafatesan'ny olona roa maty taorian'ny nahazoana tifitra avy tamin'ilay nolazain'ny tompon'andraikitra Japoney ho "nandoto".
Dosis an-tapitrisany amin'ny Moderna COVID-19 naato taorian'ny nahitana akora vahiny tamin'ny andiany maromaro.
Ny tompon'andraikitra japoney japoney dia nahita ny fandotoana tamin'ny faran'ny herinandro teo tao anatin'ny andiany iray maoderina Vaksinin'ny COVID-19 any amin'ny prefektioran'i Gunma, akaikin'i Tokyo, izay nanery ireo tompon'andraikitra hampiato vonjimaika ilay vaksiny.
Ny fanapaha-kevitra hampiato ny totalin'ny dosie 2.6 tapitrisa an'ny Vaksiny moderna dia tonga taorian'ny fitifirana 1.63 tapitrisa nijanona tamin'ny herinandro lasa teo taorian'ny nahitana ireo loto tao anaty tavoahangy sasany tao anaty andiany iray izay nalefa tany amin'ny foibe fanaovana vaksiny maherin'ny 860 manerana ny firenena.
Na dia mbola tsy voamarina aza ny loharanon'ny loto, dia nilaza i Moderna sy ny kompaniam-panafody Rovi, izay manamboatra ny vaksinin'ny Moderna, fa mety noho ny lesoka tamin'ny famokarana ny iray amin'ireo lalam-pamokarana io fa tsy misy resaka hafa.
JapanaNanamafy ny minisiteran'ny fahasalamana fa maty ny olona roa nanao vaksiny tamin'ny fatra tamin'ny fatra. Na izany aza, ny antony mahatonga ny fahafatesan'ireo tranga roa ireo dia eo am-panadihadiana ary nilaza ny tompon'andraikitra fa mbola tsy nisy ny ahiahy hita. Tao anaty fanambarana iray, Moderna sy Japoney mpaninjara Takeda dia nanambara fa "tsy manana porofo izahay fa ireo maty ireo dia vokatry ny vaksinin'ny Moderna COVID-19."
Gunma no prefektioran'i Japoney fahafito mahita ireo loto amin'ny fatran'ny vaksinin'ny Moderna, taorian'ny tranga toy izany tany Aichi, Gifu, Ibaraki, Okinawa, Saitama ary Tokyo. Tonga izy io rehefa niady tamin'ny fitomboan'ny tranga COVID-19 i Japana izay nanosika ny antsasaky ny prefektioran'ilay firenena ho ao anaty vonjy maika.
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra, Japan dia nanoratra tranga 1.38 tapitrisa voamarina fa voan'ny COVID-19 sy 15,797 voan'ny virus. Hatreto, ny tompon'andraikitra Japoney dia nitantana vaksinin'ny COVID-118,310,106 19.